Hadii Uu Guulaysto Mashruuca Tartanka Maalqabeenada Sacuudiga Ee Kooxda Newcastle United Sadexdan Tababare Keebaa Noqon Doona Macalinka Hogaamin Doona Kooxda? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Maalmihii la soo dhaafay waxaa warbaahinta England qabsaday warka in maal qabeenada dalka Saudi Arabia ee uu hogaaminayo Prince Mohammed bin Salman ay lacag waali ah ku maal galin doonaan kooxda Newcastle United.
Prince Mohammed bin Salman ayaa diyaar u ah in uu soo gaba gabeeyo heshiiska 300 milyan gini ku kacaya ee uu kula wareegayo kooxda Newcastle United si ay uga dhigaan koox awood ku leh kubbada cagta England.
Waxaa hadda la soo bandhigay afarta tababare ee midkood uu bilawga u noqon doono mashruuca waalida ah ee Prince Mohammed bin Salman waxaana sidoo kale la magacaabay saddexda ciyaartoy ee ugu macquulsan ee uu mashruucani ku bilaami doono.
Prince Mohammed bin Salman ayaa hantidiisa lagu qiyaasay £260 BILYAN gini wuxuuna sidaa ku noqon doonaa mulkiilaha kooxaha Premier League kan ugu hantida badan.
Wararka ayaa sheegaya in marka la dhamaystiro la wareegista kooxda Newcaslte united uu Bin Salman kooxda ku kharash garayn doono £200 milyan gini si uu ciyaartoy heer caalami ah ugu soo iibiyo laakiin inta aanu lacagtan kharash garayn waxa uu mashruuciisa ka bilaabi karaa saddex ciyaartoy oo magac leh oo uu si xor ah ku heli karo.
Haddaba warbaahinta ESPN ayaa lagu soo bandhigay afarta tababare ee u sharaxan mashruuca cusub ee Newcastle United iyo saddexda ciyaartoy ee lagu bilaabi karo. Halkan ayaanu idiinku soo gudbinaynaa dhamaan magacyadan.
Halkan kaga bogo afarta tababare Ee Midkood Mashruuca cusub ee Newcastle United uu la bilaaban doono.
1-Mauricio Pochettino- Wali waa bilaa shaqo tan iyo markii laga caydhiyay shaqada Tottenham bishii November ee sanadkii la soo dhaafay. Waxa uu ka mid yahay tababaryaasha khibrada iyo taatikada fiican leh ee la heli karo.
2-Massimiliano Allegri: waxa uu bilaa shaqo ahaa muddo sanad ku dhaw waana tan iyo markii uu ka baxay kooxda Juventus ee xagaagii la soo dhaafay wuxuuna ka mid yahay tababaryaasha khibrada wayn leh ee ay Newcastle-sha cusub heli karto.
3-Rafael Benitez: Waa tababarihii hore ee Newcastle United ka soo celiyay heerka labaad wuxuuna hadda ka shaqeeyaa kooxda Dalian Yifang FC laakiin waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ugu cad cad ee mashruuca cusub ee Saudi Arabia ee Newcastle United hogaamin kara.
4-Lucien Favre: Waa tababaraha hadda ee kooxda Borussia Dortmund laakiin wararka ayaa sheegaya in uu ka mid yahay tababarayaasha laga doonayo mashruuca cusub ee Newcastle United.
Waxa kale oo warkan lagu sheegay in saddexda saxiix ee ugu horeeya ee Newcastle United ay noqon karaan xidigaha sida xorta ah lagu heli karo ee Edinson Cavani oo PSG dhawaan ka bixi doona Dries Mertens oo isna Napoli si xor ah kaga dhaqaaqaya iyo Willian oo haddaba sii shaaciyay in uu Chelsea si bilaash ah kaga tagayo.
Cavani oo 33 sano jir ah ayaa ka baxaya Paris Saint-Germain waxaana la filayaa in uu raadsan doono kooxda uu doonayo laakiin mashruuca Newcastle United ayaa mid sii jiidasho yeelan kara ah.
Dries Mertens oo 32 sano jir ah ayaa isna ka baxaya Napoli oo uu ka soo tirsanaa tan iyo 2013 kii halkaas oo uu ka soo ciyaaray 309 kulan oo uu ku soo dhaliyay 121 gool.
Willian oo uu heshiiskiisa Chelsea dhacayo June 30 ayaa wali doonaya in uu sii joogo Premier league waxayna mulkiilayaasha cusub ee Newcastle United siin karaan lacag uu ku ilaawi karo in uu koox wayn ka doorto.